Moscow Sheremetyevo Airport inofamba neQatar Airways ikozvino
Location: musha » Kutumira » Airlines » Moscow Sheremetyevo Airport inofamba neQatar Airways ikozvino
Moscow Sheremetyevo Airport inofamba neQatar Airways ikozvino.
NeQatar Airways inokura network, iyo ndege inogona kupa vafambi kubva kuSheremetyevo seamless yekubatanidza kuenda kunzvimbo dzakakurumbira muAsia, Africa, Middle East neAmerica, uye nepamusoro pezuva senge Maldives, Seychelles neZanzibar kuburikidza ne 'Best Airport in the World 2021', Hamad International Airport (HIA).
Qatar Airways yatamisa masevhisi ayo kuMoscow kubva kuDomodedovo Airport kuenda kuSheremetyevo International Airport.
Kuenda kuSheremetyevo Airport kunoona kutanga kweQatar Airways 'QSuite munzira.
Qatar Airways inoenderera mberi nekuvakazve network yayo, iyo parizvino yakamira panzvimbo dzinopfuura zana nemakumi mana.
Ndege yekutanga yeQatar Airways kuenda kuSheremetyevo International Airport (SVO) yakasvika musi wa31 Gumiguru 2021. Sheremetyevo International Airport (SVO) uye ikozvino yave kushanda yayo yakawanda-mubairo yekuhwina Qsuite muBhizinesi Kirasi munzira.
QSuite ndiyo indasitiri yemubhedha wekutanga-kaviri muBusiness Kirasi, ine mapaneru ekuvanzika anomira kure, achibvumira vafambi vari muzvigaro zvinosangana kuti vagadzire imba yavo yega, yekutanga yerudzi rwayo muindasitiri.
Qatar Airways Mukuru Mukuru weBoka, Vanokudzwa VaAkbar Al Baker, vakati: “Sezvo Qsuite ichiita kutanga panzira yedu yeMoscow, vafambi vanogona kutarisira rwendo rusingakanganwike muChikoro Chebhizimisi Chakanakisisa cheNyika, kuenda kunzvimbo dzakawanda.
"Netiweki yedu iri kukura, tinogona kupa vafambi kubva Sheremetyevo yekubatanidza isina musono kunzvimbo dzakakurumbira muAsia, Africa, Middle East neAmerica, uye nzvimbo dzepamusoro dzezuva dzakaita seMaldives, Seychelles neZanzibar kuburikidza ne 'Best Airport in the World 2021', Hamad International Airport (HIA).
Mikhail Vasilenko, Mutungamiriri Mukuru weJSC Sheremetyevo International Airport, akati: “Sheremetyevo International Airport inougamuchira nomwoyo wose Qatar Airways, uye isu tinonyanya kukoshesa mwero wepamusoro wesevhisi uye mutsa unopihwa nendege kune vatengi vayo. Vafambi vanozokoshesa iyi nzira nyowani kubva kuMoscow kuenda kuDoha uye mukana wekufamba kune dzinopfuura 140 dzinoshamisa nzvimbo kutenderera pasirese. Saizvozvo, Sheremetyevo International Airport yakagadzirira kupa vafambi veQatar Airways zvinhu zvazvino uno, sevhisi yepasi rose pa5-nyeredzi Skytrax level, uye mhando yepamusoro yekutarisira vatengi kuwanikwa pakati penhandare huru dzeEurope.
Qatar Airways inoenderera mberi nekuvakazve network yayo, iyo parizvino yakamira panzvimbo dzinopfuura zana nemakumi mana. Kubva Gumiguru 140, Russia yakapinda zviri pamutemo runyoro rwekushanya kuQatar mushure mekunge yekudzivirira yeSputnik V yagamuchirwa neQatari Ministry of Health.
nzira inofamba nendege nhandare yendege Business Covid-19 Doha Kukudzwa Middle East Moscow Kwata Qatar Airways Rashiya Secheres Skytrax Zanzibar
Australia inovhurazve miganhu mushure memwedzi gumi nemisere yeCOVID-18 quarantine
Horizon Air matekiniki anobvumidza chibvumirano chitsva chemakore maviri
Amerijet International Airlines inowedzera nezvitanhatu zvitsva ...